Bhuku uye zvinyorwa zvinyorwa uye zvinyorwa - ikkaro
kudzidziswa >> Mabhuku >> Ongororo uye Zvinyorwa
Ongororo uye Zvinyorwa
Hadzisi ongororo dzekushandisa. Ini ndinoshandisa zvinyorwa zveblog, zvimwe kunyora pasi mifungo mikuru yandinoda kurangarira uye yandinoda kuongorora pane kuongorora nekupindura pane zvandinoona mubhuku racho.
Nekudaro, iwe unowana yakawanda yakawanda inoenderana ruzivo pane yega yega tebhu. Makotesheni, ruzivo rwekuda data, madingindira anomuka uye andinoda kudzamisa, kubatana uye hukama hwandinowana nemamwe mabhuku, zviitiko zvechiitiko, nezvimwe uye kufunga kwega.
Iwo kuverenga kwandinoita. Ini handisi kutaura nezvemabhuku andisina kuverenga.
Ndinovimba vanokubatsira kuti uenderere mberi nekudzidza uye kukura seni.
Comanche naJesús Maeso de la Torre
Ini ndinosimudzira kuti ndiri muyemuro mukuru wekumadokero, ndinoida. Comanche ndiye akahwina Mubairo weSpartacus weyakanakisa nhoroondo novel ye2019 uye inokurudzirwa zvakanyanya.
Iri bhuku, rine chokwadi chekufungidzira, uye izvi zviri kure nezwi re Bhiza Rinopenga uye Custer inova rondedzero inotaura chokwadi nenzira yakavimbika.
Pano nyaya inotenderedzwa muzviitiko chaizvo. Mishoni, hondo, nezvimwe, nezvimwe ndezvechokwadi. Hupenyu hwevatambi vakuru ndehwengano dzakajeka.
Inowanikwa muNew Spain mumakumi emakore ekupedzisira ezana remakore rechiXNUMX, apo Humambo hweSpain hwakadzora Mexico uye yaizozova United States of America.
Kamwe patinotaura nezvazvo madokero, tinotaurira nguva yeSpain colonization, pamberi pemakaravhani anozivikanwa evatorwa vatinoona mumafirimu vachasvika. Ini ndakanga ndisingazive kuti veSpanish vanga varipo, vachivhura nzira, zvakare vachitora yaizove United States of America, kubva muzana ramakore regumi nemana.
Cosmopolitan Ethics naAdela Cortina
Kubhejera kwehungwaru munguva dzedenda.
Ndakati handisi kuzoverenga mamwe mabhuku kana zvinyorwa zvinopesana nekumashure kwedenda. Mushure mekuodzwa mwoyo kwe Zizek denda,ndakabuda panze Innerarity Pandemocracy uye ndakanga ndatozadza dosi rangu rezvinyorwa zvedenda.
Ipapo ndakauya kuraibhurari ndokuona vhoriyamu Ethics cosmopolita uye ini naAdela Cortina ndakaverenga zvese zvandinowana. Nguva dzose inofadza. Mu blog ndakasiya wongororo ye Chii chakanakira hunhu? uye ndakamirira bhuku rake rinozivikanwa zvikuru rinonzi Aporophobia, kurambwa kwavarombo.
Kuverenga kweMonte Cristo
The Count of Monte Cristo naAlexander Dumas (baba) Ndiro novel randaverenga kakawanda. Ino inguva yechishanu mumakore makumi matatu uye nguva imwe neimwe inondisiya neimwe kuravira mumuromo mangu, iyo yandinoona mashandisiro andiri kuita uye hunhu hwangu nemafungiro angu ari kuchinja.
Icho chinyorwa cha1968, mhuri nhaka. Ndagara ndichiverenga vhoriyamu iyi, iyo ine mafoto, kubva ndichiri mudiki, uye pamusoro penhoroondo yandinoda kuverenga iyi chaiyo edition inondiyeuchidza nguva dzese dzandakaverenga. Zviri Rodegar editions neshanduro yakaitwa naJavier Costa Clavell uye kavha yaBarrera Soligro
Yakaiswa muzana remakore rechi1815, bhuku rinotanga muna XNUMX. Kana iwe usingazvizivi, inyaya yekutsiva. KUTSIVA. Imwe ye makirasi makuru ezvinyorwa zvenyika.
Bhuku rekuzivisa raJulián Simón López-Villalta de la Edhisheni Tundra. Chishamiso chidiki chakandiita kuti ndichinje maonero angu pane akawanda mapoinzi.
Mubhuku anoongorora zvese ecology yesango reMediterranean. Kuenda kuburikidza nenhoroondo yeMediterranean, nzvimbo dzayo uye zvipenyu zvakasiyana apo inotitaurira nezvemiti, shrub, herbs, carnivores, granivores, herbivores, pollinators, parasitoids, insectivores, decomposers, scavengers.
Chikamu chakatsaurirwa kurarama (kusanaya kwemvura, moto, mazaya echando, nezvimwewo) uye chimwe kuhukama pakati pezvisikwa (zvikara uye mhuka, zvipembenene, makwikwi, mutualism uye symbiosis uye vanodya uye maroja)
Sezvauri kuona, iko kutarisisa kuzere kwezvirimwa nemhando dzemhuka uye hukama pakati pavo nenzvimbo yavanogara. Zvese zvakatsanangurwa zvakakwana uye zvakasanganiswa, zvichipa muongororwo wekuti ecosystem inoshanda sei, nei yakakosha uye nei iine zvakawanda zvipenyu.
Art zvinhu. Nekuti fungidziro inogona kuchinja nyika.
Zviri nezve zvinyorwa zvakanyorwa naNeil Gaiman pamusoro pemakore uye zvinoratidzwa naChris Ridell weiyi vhoriyamu. Ndakaona bhuku raibhurari uye handina kuzeza kuritora. Ini ndatoziva Neil Gaiman we Coraline, for Mabhuku emakuva uye zvimwe zvinhu zvakawanda zvandinazvo pane izvo zvinyorwa asi izvo zvandisati ndaverenga (American Gods, Sandman, Kudzora, yako Nordic ngano, nezvimwewo). Chris Ridell ini ndaisaziva. Shanduro yacho inoitwa naMontserrat Meneses Vilar.
Ini ndinogara ndichifarira kuverenga dzimwe mhando dzevanyori dzinondinakidza, kunyanya kana dziri rondedzero, misangano uye maonero avanazvo pahupenyu nemabhuku.
V yeVendetta naAlan Moore naDavid Lloyd
Kutsvaga webhusaiti reibhurari yeguta rangu ini ndakawana V yeVendetta naAlan Moore naDavid Lloyd. Ini ndanzwa nezve ino yakajeka graph sebasa rechitendero uye ini ndaida kunyatso kuverenga.
Zviripachena kune rumwe ruzivo rwakawanda kupfuura irimo mufirimu uye zvese zvine musoro. Pano tinoona kuti V anobva kupi neGuy Fawkes mask, kape yake neheti yake. Isu tinonzwisisa zvirinani mamiriro uye nei kutsiva kuchiitika.
Clepsydras uye maawa echiMuslim naAntonio Fernández-Puertas
Ndicho monograph pamaawa egirazi, wachi dzechiMuslim uye mamwe mahoridhe yakanyorwa naAntonio Fernández-Puertas anova Muzvinafundo weNhoroondo yeMuslim Art paYunivhesiti yeGranada. Iye ndeweSuperior Facultative Muviri weMuseums uye anga ari director weNational Museum yeSpanish-Muslim Art muAlhambra.
Hakusi kuverengera munhu wese, asi kana iwe uchida kupinda munyika ino yemawachi emvura, maatomatoni, horologies, nezvimwewo uchazvida. Kunze kwekutsanangura huwandu hwakawanda hwezvigadzirwa uye kutiudza kuti kupi uye riinhi, takapinda muhumambo hweByzantine kuti tione zvishoma kubwinya kwaro uye zvishamiso zvavanofanira kuve nazvo.
Kunyanya sezvo pasina ruzivo rwakawanda rwuripo paInternet nezve Clepsydras uye zviripo handigone kuona zvizere.
Nyanzvi yezve geologist mukutambudzika naNahúm Méndez
Chidiki chakakurumbira chinyorwa kutizivisa isu kune inoshamisa nyika ye geology. Yakanakira avo vese vanoda kutanga uye vaone zvinoitwa nesainzi iyi.
Nyanzvi yezve geologist mukutambudzika. Rwendo kuburikidza nenguva uye nekudzika kwepasi
Iye munyori ndiNahúm Méndez, geologist uye munyori weblog re Nyanzvi yezve geologist mukutambudzika. Ndave ndichimutevera kwenguva yakareba pane yake twitter @geologoinapuros
Ini ndaizvida chaizvo, asi ndingadai ndaimuda kuti apinde mumunda geology zvakanyanya. Ndinovimba kuti pachave neyechipiri vhoriyamu iri kutopinda mune yemhando yemhando mafomu, matombo, zvicherwa, nezvimwe. Gwaro rinobatsira munhu wechisikigo kuti aende kunze mumunda uye anzwisise kuti ndeapi mafomati aari kuona uye nei vakaumba.
Imwe Ipfungwa Yezve Nyika naAlessandro Baricco
Ndakaverenga Silk y Crystal nyika naAlessandro Baricco makore mazhinji apfuura. Yokutanga yandakaverenga kakawanda, yechipiri yakarasika mundangariro dzangu, asi ndinobata munyori uyu ndichimuremekedza. Saka pandakaona iri rekuongorora bhuku muraibhurari handina kufunga nezvazvo. Ini ndoda kuona izvo vanhu vandakaverenga kuverenga :)
Imwe pfungwa yenyika ibhuku rekuongorora mabhuku. Kwete kubva kumabhuku aunonyanya kufarira, asi kubva kumabhuku awakafarira mune ingangoita gore rimwe chete. pakati pegore ra1 na2011.
Kune mabhuku makumi mashanu, rimwe nerimwe riine ongororo yemapeji angangoita matatu, kwaanotiudza zvaakaona, rangano kana nyaya ine chekuita nebhuku. Iri ibhuku remabhuku, mhando yatinogona kusanganisira 84 Charing Cross Road.
Zvese zvakanyorwa uye zvinotaurwa nenzira yakashata.
Pandemocracy naDaniel Innerarity
Ndave ndichitevera kwenguva yakareba Daniel Innerarity pa Twitter uye zvinogara zvichinakidza kuverenga zvaunofunga. Saka kunyangwe usiri kuda kuverenga zvimwe zvinyorwa pane denda mushure meiyo fiasco ye Covid-19 naZizek. Ndakashinga ne Pandemocracy. huzivi hwecorronavirus dambudziko y Ndakaifarira zvakanyanya.
Yokutanga. Zvinotendwa kuti rondedzero yakarongedzwa zvakanaka, kuti ine mamiriro akajeka uye inopokana nepfungwa, kuti pane tambo yakajairika mukati meiyo rondedzero uye kuti ivo havana kusununguka mazano epilgrim. Zvese zvisina kuitwa naZizek.
Icho chinyorwa chinodhura uye chiri nyore kuverenga. Usatya kuzviverenga kana usati wajaira rudzi urwu, uye usatya kutya chirevo chaMeritxell Batet icho chakaomesesa kutevera kupfuura zvinyorwa zveInnerarity.